'UKUTSHATA EKUBONENI KOKUQALA' UKUPHINDAPHINDA: USAM 'AKATSALWANGA' KUNEIL - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato 'Ukutshata ekuboneni kokuqala' Ixesha lesi-3, Isiqendu 3 Ukuphindaphinda: USam Akakhange atsalwe kuNeil
'Ukutshata ekuboneni kokuqala' Ixesha lesi-3, Isiqendu 3 Ukuphindaphinda: USam Akakhange atsalwe kuNeil
Kwisiqendu se-15 kuDisemba se-FYI sitshatile ekuboneni kokuQala, uSam noNeil baya kwiholide yabo yomtshato eSt Croix kwaye bazana. Ityala: L. Hunter Photography
Ngu: Kelly Spears 12/16/2015 kwi-11: 33 AM
iimpawu zesindululo esiza
Njengokuba ukudibana nabayeni babo esibingelelweni kwakungeyongozi ngokwaneleyo, i Ukutshata ekuboneni kokuqala Oomolokazana ngoku bachitha ubusuku babo bodwa bebodwa kunye nematshisi yabo kwaye bakhutshelwa ngaphandle kwiholide zekhefu.
Isiqendu se-15 kuDisemba, esasinesihloko esithi Ubusuku Bomtshato, sasinemitshato emithathu ebethwe kakhulu kunye nabafazi babo abangaqinisekanga. Masingene kwiinkcukacha njengoko silindele ixhala leveki ezayo ...
UNeil Bowlus kunye nendima kaSam: Nangona usapho lukaSam luchukumisekile ngumdlalo wakhe, akaluva unxibelelwano. Inxalenye yam ifuna ukukhala kuba ndinomfanekiso owahlukileyo entlokweni yam, umtshakazi omtsha uyavuma. Bendicinga ukuba ndizakumfumana enomtsalane… kodwa andiyenzi. UNeil ekuqaleni wonwabile nomtshakazi wakhe, kodwa uqala ukuziva uxinzelelo xa befika kwisuti yabo yasemva komtshato. Kukho ukungangqinelani, umyeni uyavuma, kwaye ngamanye amazwi, ndithetha nje ukungangqinelani… Kwilinge lokuhlekisa, uNeil utshintsha waba yipijama enye enamagama amakhulu amacephe esifubeni. Ngelixa uSam kubonakala ngathi uxakekile kukukhetha komyeni wakhe isinxibo sasemva komtshato, ufumana ukuhleka okuhle kuyo.
Esi sibini asiwugqibi umtshato wabo, kwaye kubonakala ngathi akukho zicwangciso zesini ngalo naliphi na ixesha kungekudala. Ngelixa bonwabele inkonzo yasekamelweni kusasa emva komtshato wabo, bavula ikhadi elibazisa ukuba bazokuya eSt Croix kwiholide yabo yasemva komtshato. Andizukulala noNeil kwiholide yam yasemva komtshato, uSam uxelela ababukeli, kwaye uyayilandela ngengxoxo yentliziyo emnandi nomdlalo wakhe. Anditshatanga ngokwasemzimbeni kuwe, uxelela umyeni wakhe ngelinge lokunyaniseka ngokumasikizi. UNeil ujongeka othukile kodwa utyhila ukuba, ngelixa umfazi wakhe emenza buhlungu, ndiyayihlonipha. Umyeni uya phambili esithi ayisiyiyo yonke inkangeleko. Andingo-10 kwisikali esivela kwi-1-10, uyavuma. Ndiyayazi lo nto.
Ngaphandle kwencoko enzima, esi sibini sithatha uhambo lwaso lwetropiki. Nangona uSam oyikiswa yingcinga yokubona ukrebe, uyavuma ukuya e-snorkeling noNeil ngethemba lokuba iyakubanceda ubudlelwane babo. Ngelishwa, uNeil ubambeke mzuzu kangangokuba akaze ajonge umtshakazi wakhe ngaphantsi kwamanzi. Uyakhululeka xa ebuyela esikhepheni, kodwa yintoni ebinokuba nakho ukuba ngamava ezothando iyehla kumsele.
UNeil uyazi ukuba ubudlelwane buza kuthatha umsebenzi omninzi. Andonwabanga. Unzima. Kodwa siza kuyifumana, uxelela ababukeli. USam uyavuma ukuba akonwabanga ukulala nomyeni wakhe omtsha, kodwa umlo womqamelo ubonakala ngathi uqhekeza umkhenkce. Ukuhleka kubonakala kuphela konxibelelwano phakathi kwaba babini ukuza kuthi ga ngoku. Ngaba oko kwanele ukwakha isiseko? Asikayincami le duo okwangoku!
UTres Russell kunye noVanessa Nelson: Aba batshatayo babenonxibelelwano olukhawulezileyo ngomhla wabo womtshato, kwaye ukungabikho kobunzima phakathi kwabo xa bebodwa kuyahlaziya. Nangona uTres engonwabanga ukugqiba umtshato wakhe, uVanessa akakakulungeli. Umtshakazi uyavuma, ndiyakonwabela ukwanga umyeni wam, kodwa uthi ukusondelelana kufanele kuvele ngokwendalo.
Ngentsasa emva komtshato wabo, esi sibini sifumanisa ukuba siza kuya eSt. John kwiholide yabo yasemva komtshato. Bavula izipho zomtshato ebhedini ngaphambi kokudibana neentsapho zabo ngebrunch yasemva komtshato. Usapho lwam aluzange lumse emntwini endikhe ndathandana naye njengokuba benjalo kwintombazana endisandula ukudibana nayo, utsho uTres. I-chemistry ibonakala ithwala isuka kwisibini esonwabileyo iye kubantu ababathanda kakhulu.
Ngomothuko omangalisayo, uVanessa ubonakala enezimvo zesibini ngexesha lokuncokola ubuso ngobuso elunxwemeni eSt. UTres ngumntu owayesakuba ngumdliwo we-serial, kubonakala ngathi, kwaye umtshakazi wakhe ukhathazekile ungumdlali odlalayo. Nangona uTres ekholelwa ukuba uVanessa angamlinganisela kwaye amcothise, umtshakazi omtsha woyika ukuba bakwiindawo ezahlukeneyo ebomini babo. Ndiyamthanda uTres, uVanessa uyavuma, kodwa ndibathandile abafana abaninzi abaphenduke bengenanto ikhethekileyo. Ngaba ixesha elidlulileyo likaTres liza kubuyela kuye? Siziva ngathi kunokuba njalo.
UDavid Norton kunye no-Ashley Doherty: Ngaphandle kwesiqalo sabo esinamatye ngokumangalisayo, u-Ashley uvula ingqondo yakhe ukuba anokonwaba naphakade emva kukaDavid. Uyamangaliswa yile nto angumnumzana kwaye uyabelana, ndivuthelwa nje yindlela andiphethe ngayo. Ukutshintsha kwentliziyo yomtshakazi kunokuba nayo yonke into ayenzayo kwixesha lakhe elidlulileyo. Ngaphambili wayegxininisa kwinkangeleko yamadoda, kwaye uyaqonda ukuba loo ndlela ayinakuze iphumelele.
Emva kokuthwala umfazi wakhe embundwini, aba babini baxoxa ebhedini, bade barekhode usuku olunye kwividiyo kwidayari kaDavid ngaphambi kokuba balale. Ngelixa kukho ukuqonda okungachazwanga ukuba akusayi kubakho sini ebusuku somtshato, esi sibini simangalisiwe kukwabelana ngebhedi ayothusi kubo.
Njani ro tie tie isaphetha
Kwi-brunch yasemva komtshato kunye neentsapho zabo, oomama babo bayavuma ukuba abenzi bemidlalo abenzanga kuphela umsebenzi obalaseleyo wokudibanisa uDavid noAshley kunye; Balinganise iintsapho ezigqibeleleyo, nazo. Emva kokuba bethethile, i-duo iya kwi-honeymoon yabo e-Arizona.
U-Ashley ukhulula ngokukhulu, kwaye umyeni wakhe omtsha akanako ukususa amehlo akhe kuye. Uyavuma ukuba ukuhlala nomfazi omhle ngolu hlobo kumnika ukuzithemba, kwaye uthi, kuhle ukujonga ngaphaya kwaye umbone ehleka. Ngendlela ehloniphekileyo, uDavid ubuza uAshley indlela aziva ngayo ngexesha lesidlo sangokuhlwa sothando. Nangona umntu osandul 'ukutshata evuma ukuba akanazo iimvakalelo zekhefu lasebusuku, uqinisekisa umyeni wakhe ukuba akukho nto ayenzileyo. Lo mdlalo ubonakala uhamba kwicala elifanelekileyo. Ngaba isigaba sakusasa siya kuqhubeka nje ukuba babuyele ebomini bokwenyani? Lixesha kuphela eliza kuxela…
izimvo zomthombo wamanzi ngaphakathi
tshintsha igama lakho emva komtshato